Mamolavola ny fandroana ao an-trano mba ho tsara tarehy ary hanana endrika tsara ao anaty fandroana isan'andro
Home / Blog / Mamolavola ny fandroana ao an-trano mba ho tsara tarehy ary hanana endrika tsara ao anaty fandroana isan'andro
2021 / 01 / 11 FisokajianaBlog 1828 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-23
Ny trano fidiovana toy ny toerana ampiasaina matetika kokoa amin'ny fampiasana isan'andro. Amin'ny famolavolana, raha tsy manao tsara tarehy ianao, fotoana, dia hahatsapa ho tsy mahazo aina ihany koa ianao. Ka ahoana no hanomezana ny fandroana ho lasa tsara tarehy kokoa? Mizara tranga famolavolana fandroana lafo vidy ho anao aho anio, antenaiko fa mety hanana toetra tsara isan'andro fandroana ianao.
Ny endrika volondavenona dia malaza be tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny efitrano fandroana ao an-trano izao dia azo diovina amin'ny taila volondavenona vita amin'ny volondavenona, miaraka amin'ny fanaka malefaka fotsy sy mainty ary fanadiovana ara-pahasalamana, toa tanora sy malala-tanana.
Azonao atao koa ny manampy hazo, mavokely, sns. Amin'ny toerana volondavenona toy ny toner mba hisorohana ny rafitra volondavenona ankapobeny toa manjavozavo loatra ny sasany, ny pitsopitsony dia miasa tsara dia mety hahatonga ny fandroana ho lasa tsara tarehy kokoa.
Ny fitambaran'ny endrika mainty sy fotsy dia tena mety amin'ny fomba maoderina, ny fomba minimalista, ary ny taila hexagonal vita amin'ny tany dia ny fanitarana ny fahatsapana ny habaka ao an-trano fandroana, mba ho malalaka kokoa ny trano fandroana.
Ny taila marbra no safidin'ny ankamaroan'ny tompon-trano, ary ny taila marbra dia misy endrika sy alokaloka samihafa ihany koa, izay azo tapaka araka ny safidinao. Ny singa metaly dia azo ampiana ihany koa mba hahatonga ny trano fandroana ho hita atmosfera kokoa.
Ny taila famoronana sasantsasany vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia mety hahatonga ny efitra fandroana hahaliana kokoa, fa mba hisorohana ihany koa ny tsy hisavorovoro loatra, ny safidin'ny tonony dia tena zava-dehibe.
Manampia taila voninkazo mahafinaritra ho accents ao amin'ny trano fidiovana tsotra sy malala-tanana. Ny fametrahana ny faritra fandroana sy ny gorodona amin'ny taila voninkazo miloko manga dia mahatonga ny fandroana ho toa literatiora ihany koa.
Ny efitra fandroana mahazatra ao an-trano dia afaka misafidy ny hanao ny hilentika ivelan'ny varavaran'ny trano fidiovana, mba ho mora kokoa amin'ny fampiasana isan'andro. Ary ny milentika tsy miankina ivelan'ny trano fidiovana, fa koa milalao ny haingon-trano vokany.
Ampy ny faritra fandroana, afaka mamorona endrika telo ianao izao. Manasarà ny fidiovana, ny faritra milentika ary ny fandroana, ary asio fizarazaran-tarehy tsara tarehy mba hahasalama kokoa ny fandroana.
Rehefa avy mijery ireo tranga famolavolana trano fidiovana ireo ianao dia mila mahita ny tianao indrindra? Heveriko fa ny famolavolana ny fandroana dia azo faritana arakaraka ny fomba ao an-trano, ohatra, ny volon-davenona misy fandroana dia mety tsara amin'ny fomba minimalista sy Skandinavianina. Ny famolavolana ny lampivato marbra dia mety amin'ny fomba maoderina sy eropeana. Araho ny fomba tsy hahatonga ny fandroana ho tampoka loatra.
Previous :: Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana… Fahagagana! Faingana hilazana ny mpanjifanao! Next: Tonga ny ririnina! Tokony hividy kojakoja fandroana thermietika ve aho? Henoy Ireo manam-pahaizana, tsy mahagaga raha maro ny olona te hiova !!!